नेपालको विश्वकप यात्रा टुंगियो
काठमाडौं- आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप छनोट अन्तर्गतको एसिया फाइनलको अन्तिम खेलमा नेपालले घरेलु टोली सिंगापुरसँग नमिठो पराजय भोगेको छ ।
आइतवार सिंगापुरको इन्डियन एसोसियसन क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा नेपाल सिंगापुरसँग ८२ रनले पराजित भएको हो ।
हारसँगै नेपालको विश्वकप यात्रा टुंगिएको छ । प्रतियोगिताको विजेताले आगामी वर्ष अष्ट्रेलियामा आयोजना हुने टी-ट्वान्टी विश्वकप खेल्न पाउनेछ । यस प्रतियोगिता आफ्नो कब्जामा पार्दै सिंगापुर भने ग्लोबल छनोटमा पुगेको छ ।
टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले निर्धारित ओभरमा १९१ रनको योगफल बनाएको थियो ।
१९२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाली टोली १५ ओभर १०९ रनमै अलआउट भयो ।
सिंगापुरका लागि सेलाडोरे विजयकुमारले ४ तथा विनोद बसकरणले २ विकेट लिए ।
नेपालले ओपनर कप्तान पारस खड्कालाई शुरूमै गुमायो । उनले १२ रन बनाए । उपकप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले २१ बलमा ३९ रन बनाए । त्यस्तै दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २३ र सोमपाल कामीले ११ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याट्स्‌म्यानले दोहोरो अंक जोड्न सकेनन् ।
टस जितेर ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले विस्फोटक इनिङ खेलेको थियो । २० ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै १९१ रन बनाएको सिंगापुरका लागि टिम डाभिडले सर्वाधिक ७७ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । त्यस्तै रोहनले ४९ रन बनाए भने मनप्रित सिंहले ४२ रनको योगदान गरे ।
बलिङतर्फ नेपालका लागि अविनाश बोहराले ४ तथा करण केसीले २ विकेट लिए ।
पैसा नभएर बिहे भएन ? सरकारले नै दिन्छ ४ लाख बढी विवाह खर्च !
कुनै कुरा छुँदा करेन्ट लागेजस्तो हुन्छ ? यस्तो हो कारण !
सुदूरपश्चिममा ७७ हजार व्यक्तिको कोरोना परीक्षण